Odayaasha Dhaqanka oo Dib-u-eegis ku Sameeyay Dastuurka Cusub – idalenews.com
Odayaasha Dhaqanka Soomaaliyeed oo in dhawaale ku mashquulsanaa xulista ergadada ansixin laheyd dastuurka ayaa waxaa hadda ay maanta dib u eegis ku sameeyeen daldalooda
ku jira qaar ka mid ah dastuurka, iyadoo ugu dambeyntiina gaarey in cabashadooda qodobada qaar loo gudbiyo masuuliyiinta dowlada si loo turxaan bixiyo taasna bedelkeeda ay iyaguna soo dedejiyaan howsha dhameystirka kala guurka sida soo xulista xubnaha barlamaanka iyo ergadii ansixin laheyd dastuurka.
Tilaabadan horusocodka ah ayaa waxay timid kadib markii dood waxtar leh laga sameeyay arimaha dastuurka iyo horumarintiisa. Odayaasha dhaqanka ayaa si dib u heshiisiin ku jirto waxay wadada u xaareen geedi socodka qorshaha kala-guurka ee lagu soo dhameystirayo xiliga kumeelgaarka.
Wasiirka arimaha dastuurka iyo dib u heshiisiinta, mudane Cabdiraxman Xoosh Jibriil ayaa soo dhaweeyay tilaabadan muhiimka ah, “Waan ku faraxsan nahay horumarka la sameeyay. Shacabka Soomaaliyeed waxay sugayaan isbadal, tilaabadan waxay xaqiijineysaa arintaas. Waa inaan wada shaqeynaa si loo helo dibu heshiisiin dhab ah, loona badbaadiyo jiilasha soo socda, dowlad hufan oo shacabka u adeegtana loo hirgaliyo oo ka kooban bulshada qeybaheeda kala duwan.”
Tilaabada xigta qorshaha tubta nabadda ayaa ah mid ay odayaasha dhaqanka ay ku xuli doonaan ergada ka soo qeyb galeysa shirka Ansixinta Dastuurka oo tiradoodu tahay 825. Hadii ay hirgasho, dastuurka wuxuu shaqeyn doonaa inta laga helaayo afti buuxda oo shacabka Soomaaliyeed u codeeyeen.
Fadhigii Ansixintii Dastuurka oo mar 2aad Dib u dhacey